Empire Defender TD ဖြစ်သည်: မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာဂိမ်း TD Cheats&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
Empire Defender TD ဖြစ်သည်: မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာဂိမ်း TD Cheats&Hack
မင်းဟာနည်းဗျူဟာဂိမ်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့မာစတာတစ်ယောက်ပါ? မင်းရဲ့ပညာရှိနည်းပရိယာယ်တွေကိုရှင်သန်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုတိုက်ပါ. သင်၏အားကြီးသောသူရဲကောင်းများကို ဦး ဆောင်ပြီးအမှောင်ထုမှသင်၏နယ်ပယ်နယ်နိမိတ်ကိုခုခံကာကွယ်ပါ!
သင်ဟာစစ်မှန်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ, ဒီ TD အော့ဖ်လိုင်းနည်းဗျူဟာဂိမ်းကိုလက်လွတ်ခံလို့မရဘူး! အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်များနှင့်စွဲမက်ဖွယ်ကစားနည်းကြောင့်သင်အံ့သြလိမ့်မည်.
ဒီဗျူဟာဂိမ်းမှာမင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကမင်းရဲ့ထီးနန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ကျူးကျော်သူတွေကိုချေမှုန်းပစ်ဖို့မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဘဲ, ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမင်းရဲ့နယ်ပယ်ကိုပြန်ယူလာပေးပါ. ၎င်းသည် TD ဂိမ်း၏စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလက္ခဏာများကိုဖမ်းရုံသာမက, ဒါပေမယ့်၎င်းသည်သင့်အားနာရီပေါင်းများစွာကစားစေသော features အသစ်များစွာလည်းပါ ၀ င်သည်!
attractive ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမော်ကွန်းမျှော်စင်ကာကွယ်ရေး, ပျော်စရာနှင့်အခမဲ့! ငါတို့အဲဒါကို Battle TD လို့နာမည်ပေးတယ် (btd).
anywhere အချိန်မရွေးနေရာမရွေးကစားနိုင်သော Offline mode.
power သင့်လက်၌ရှိသမျှစွမ်းအားအားလုံးကိုထည့်စဉ်းစားပါ, အသင့်တော်ဆုံးသောနည်းဗျူဟာနှင့်နည်းဗျူဟာများရှိရန်သင်၏ရန်သူအကြောင်းကိုဂရုတစိုက်လေ့လာပါ. သင်၏အကောင်းဆုံးကာကွယ်ရေးကိုတည်ဆောက်ပြီးဘုန်းကြီးသောအောင်ပွဲကိုရယူပါ!
၏ 120+ မဟာဗျူဟာဂိမ်းတွင်စိန်ခေါ်မှုနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောမြေပုံများနှင့်အဆင့်များ.
၏4ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အားသာချက်များနှင့်အတူကာကွယ်ရေးတာဝါအမျိုးအစားများ, အတူလိုက်ပါ5upgrade လုပ်နိုင်တဲ့ options များ. လေးသမား, မှော်ဆရာ, သူရဲ, နဂါး, ဂေါလ,..အားလုံးသင်ပိုင်တယ်.
၏ 11 မတူညီသောစွမ်းအားများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများရှိသောသူရဲကောင်းများ. btd ကို ဦး ဆောင်ရန်သင်၏သူရဲကောင်းများကိုရွေးချယ်ပါ6စစ်ပွဲနှင့်အလျင်စလိုအပြစ်ပေးသည်. ရှုံးသည်ဖြစ်စေရှုံးသည်ဖြစ်စေ, သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်!
၏ 10+ မင်းရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုအားဖြည့်ပေးမယ့်ထူးခြားတဲ့ Runes အမျိုးအစားများကိုသူတို့ကမဆိုပြင်းထန်တဲ့သူဌေးတွေနဲ့ကျူးကျော်သူတွေကိုတွန်းပို့နိုင်တယ်.
၏ 30+ သူတို့၏မကောင်းသောစွမ်းရည်များနှင့်ရန်သူအမျိုးအစားများ. minions တွေကိုလျှော့မတွက်ပါနဲ့, သို့မဟုတ်သူတို့သည်သင်၏ရဲတိုက်ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်!
this ဒီစွဲလမ်းစေသောနည်းဗျူဟာနှင့်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းများနှင့်အခြားကာကွယ်ရေး td ဂိမ်းများတွင်သင်ဘယ်တော့မှမတွေ့နိုင်သောပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲ!
၏5အားဖြည့်သည် – အခက်ခဲဆုံးအချိန်များတွင်စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်များ.
ထက်ပိုပါတယ် 100 ဒီဂိမ်းတွေမှာအောင်မြင်မှုတွေ – အင်အားအတောင့်တင်းဆုံးနောက်ခံလူကိုအနိုင်ယူဖို့စောင့်ပါ!
▶ယှဉ်ပြိုင်မှုပြိုင်ပွဲ: ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူကဘယ်သူလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်, အဆုံးမရှိစိန်ခေါ်မှု!
ခေါင်းကိုက်။ မကောင်းသောရန်သူများမှသင်၏ရဲတိုက်နှင့်နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ရန်အလုအယက်. အလွန်မော်ကွန်းတိုက်ပွဲများ td အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ6အချိန်တိုင်း.
Best Defender Ever ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမင်းတောင်းဆိုဖို့ငါတို့စောင့်နေတယ်!
Empire Warriors TD ၏နောက်ထပ်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ:
– အီးမေးလ်: empiredefender@zitga.com.vn
– တရားဝင် Fanpage: https://www.facebook.com/empire.defender.official
– တရားဝင်အုပ်စု: https://www.facebook.com/groups/empiredefender
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Defender, ကာကွယ်ရေး, အင်ပါယာ, ဂိမ်း, နည်းဗျူဟာ, တာဝါ
← Idle Creepy Park Inc မှ. – လှိုင်သာယာ&Hack Unicycles ပေါ်တွင် Unicorns – လှိုင်သာယာ&Hack →